२७ जिल्लामा पुग्यो सलह, प्युठानमा मकै बाली ‘सखाप’ ! - Sagarmatha Online News Portal
२७ जिल्लामा पुग्यो सलह, प्युठानमा मकै बाली ‘सखाप’ !
काठमाडौं । गत शनिबार भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको सलह किरा काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका २७ भन्दा बढी जिल्लामा पुगेको छ ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका किट विज्ञ एवं सलह सूचना केन्द्रका संयोजक रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार मंगलबार साँझसम्म सलहका झुन्डहरू २७ जिल्लामा देखिएको हो ।
केन्द्रका अनुसार सलहका ५ वटा झुन्ड भारतबाट नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । झुन्डहरू २७ जिल्लामा देखिएपनि अन्य स–सना समूहहरू भने अन्य जिल्लाहरूमा समेत देखिएका छन् ।
सोमबार साँझ रुपन्देहीमा प्रवेश गरेको झुन्ड अहिलेसम्मकै ठूलो भएको बताए । भैरहवामा प्रवेश गरेको सो झुन्ड टुक्रिएर ३ तिर लागेको देखिन्छ । यो झुन्ड पश्चिम भेगतिर गइरहेको सलह सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।
यो झुन्ड टुक्रिएर प्युठान र दाङ पुगेको छ । प्युठान पुगेको उक्त झुन्ड टुक्रिएर रोल्पा हुँदै सल्यान पुगेको सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाहरूमा सलहका झुन्डहरू देखिएका छन् ।
भारतमा केही दिनयता पश्चिबाट पूर्वतिर हुँदै हावा बहने गरे पनि उत्तर प्रदेश र बिहारमा हावाको चाप कम भएपछि पश्चिम उत्तरतिर हावा मोडिने क्रममा सलह नेपाल प्रवेश गरेको किट विज्ञहरूले बताएका छन् ।
यसैबीच गत आइतबार प्युठानमा पहिलो पटक देखिएको सलहले मकैबालीमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । सलहले मैकैबाली सखाप पारेपछि स्थानीय किसान चिन्तित बनेका छन् ।
सरुमारानी गाउँपालिका–३ दुमहीमा लगाइएको मकैबाली सलहले सोत्तर पारेपछि किसान निराश बनेका हुन् । दुमहीका स्थानीय चुम बहादुर रानाले भने, ‘मकै हुर्कदै गर्दा अमेरिकी फौजी किराले आक्रमण ग¥यो । कृषि प्राविधिकको सल्लाह अनुसार विषादी छरेपछि फौजी किरा केही नियन्त्रणमा आएको थियो तर मंगलबार आएको सलहको झुन्डले पुरै सखाप बनायो ।’
हंसपुर गाउँपालिकाका अधिकांश किसानको यो साझा समस्या बनेको छ । सरुमारानी ३ कोटाचौरकी चमेली पल्लीले पनि बारीमा लगाएको मकैको पात सलह किराले खाएर सखाप पारेको बताइन् ।
‘६ महिना खान पुग्ने मकै सलहले छिनभरमै स्वाहा पा¥यो ,’ पल्लीले भनिन,’ अब के खाने ? मंगलबार सरुमारानी –३ हंसपुरको दुमही, कोटाचौर, कोटघर टोल लगायतका झण्डै ५० जना किसानले लगाएको मकैमा सलहले क्षति पु¥याएको स्थानीयले बताएका छन् ।
सलह भगाउन आगो बाल्ने, थाल ठटाउने जस्ता विधि अपनाए पनि सलह नभागेको उनीहरुको भनाइ छ । क्षतिको मुल्याकंन गरी किसानहरुलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन उनीहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
ठूलो झुण्ड बनाएर गाउँ पसेको सलहले खाद्यन्न बालीमा नोक्सानी पु¥याएको वडाअध्यक्ष भीमबहादुर मर्साङ्गीले बताए । प्रभावित किसानलाई भेटेर उनले राहतका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
सरुमारानी गाउँपालिकाकी कृषि शाखा प्रमुख चम्पा पाण्डेले सलहले अन्न बालीमा क्षति पु¥याइरहेको बताइन् । सलहले पु¥याएको क्षतिको एकिन तथ्यांक संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिइन ।
हालसम्म सलह देखिएका जिल्लाहरू